ကွန်ဒိုများ ငှားရန်အတွက် တွင် မန္တလေး, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး - 91 စာရင်းများ | FazWaz.com.mm
ရောင်းရန်အတွက် ကွန်ဒိုအိမ်ခြံမြေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအိမ်သစ်များဈေးနှုန်းလျော့ချထားသော အိမ်များ
တွင် မန္တလေး, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ငှားရန်အတွက် ကွန်ဒိုများ
FazWaz.com.mm ပေါ်တွင် ရရှိနိုင်သော 91 ကွန်ဒိုများ
Virtual 3D tours of မန္တလေး ကွန်ဒိုများ for rent
Turn on this filter to only view ကွန်ဒိုများ for rent with 3D virtual tours!
2 Bedroom Condo for rent in Yangon
Mandalay, မန္တလေး, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
2 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at2Bedroom Condo for rent in Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,200 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Mandalay, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for rent in...
221,200 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,250 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Mandalay, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for rent in...
221,250 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,300 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Mandalay, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for rent in...
231,300 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 925 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Mandalay, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for rent in Y...
23925 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 900 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Mandalay, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for rent in Y...
Don't miss out! Get notified when new ကွန်ဒိုများ for rent are listed တွင် မန္တလေး, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 972 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Mandalay, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for rent in Y...
22972 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,800 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Mandalay, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for rent in...
221,800 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,500 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Mandalay, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for rent in...
Log in to get the best experience Get access to exclusive prices for ကွန်ဒိုများ for rent တွင် မန္တလေး
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,450 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Mandalay, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for rent in...
221,450 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,470 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Mandalay, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for rent in...
221,470 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 760 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Mandalay, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for rent in Y...
22760 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,242 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Mandalay, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for rent in...
221,242 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 722 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Mandalay, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for rent in Yango...
2 1 722 စတုရန်းပေ
Make an offer directly to the owner ofaကွန်ဒို that is for rent တွင် မန္တလေး
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 144,828 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Mandalay, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for rent in Y...
2 1 144,828 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,000 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Mandalay, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for rent in...
221,000 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,152 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Mandalay, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for rent in...
221,152 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 960 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Mandalay, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for rent in Yango...
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,012 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Mandalay, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for rent in...
221,012 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 1,200 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Mandalay, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for rent in Yan...
2 1 1,200 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 1,500 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Mandalay, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for rent in Yan...
2 1 1,500 စတုရန်းပေ
3 Bedroom Condo for rent in Yangon
3 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at3Bedroom Condo for rent in Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်4ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 2,100 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Mandalay, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for rent in...
342,100 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,750 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Mandalay, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for rent in...
321,750 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်4ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 2,750 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Mandalay, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for rent in...
342,750 စတုရန်းပေ
1 - 30 ၏ 91 အဖြေများ
မန္တလေး ၏ အိမ်နီးချင်းများကို ဖော်ထုတ်ပါ
သင့်အတွက် 91 ကွန်ဒိုများ
ငှားရမ်းခြင်း :5သိန်း - 92 သိန်း
မန္တလေး ငှးရမ်းခ ဈေးကွက် ပုံစံများ
မန္တလေး အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက်တွင် နောက်ဆုံး ငှားရမ်းခ နှုန်းထားများကို ရှာပါ။
မန္တလေး တွင် နေထိုင်ခြင်းအတွက် အားထုတ်နိုင်စွမ်း
မန္တလေး တွင် ငှားရမ်းနိုင်သော အိမ်များအတွက် လစဉ်ငှားရမ်းခ အလယ်အလတ်သည် 11 သိန်း ဖြစ်သည်။ The median monthly rent per square feet in မန္တလေး is0သိန်း ယခုလက်ရှိတွင် မန္တလေး တွင် 91 အိမ်ခြံမြေများ ငှားရန် ရရှိနိုင်သည်။
မန္တလေး ပျမ်းမျှငှားရမ်းခနှုန်းထားများ , အိမ်အရွယ်အစားဖြင့်
ကွန်ဒို အရွယ်အစား လစဉ် ပျမ်းမျှငှားရမ်းခ2အိပ်ခန်းများ (27 ကွန်ဒိုများကြည့်ပါ) 13 သိန်း3အိပ်ခန်းများ (64 ကွန်ဒိုများကြည့်ပါ) 21 သိန်း
မန္တလေး တွင် အိမ်နီးချင်းများ
Mandalay 91 ကွန်ဒိုများ ရရှိနိုင်သော
ဇိမ်ခံပစ္စည်း အိမ်ခြံမြေ တွင် မန္တလေး
တတ်နိုင်သေ အိမ်ခြံမြေ တွင် မန္တလေး